China Fivarotana mafana novokarin'i China R22 R25 R28 R32 R35 R38 Fitrandrahana fitrandrahana famafana mpanamboatra Rob sy mpamatsy | JinJuFeng
Ny orinasanay dia manana atrikasa famokarana fantsom-by sy fantsom-pitrandrahana vy ary atrikasa famokarana vokatra manohana azy. Mba hahatratrarana ny famolavolana, ny fanodinana, ny famokarana amin'ny alàlan'ny lamasinina. Izahay no manana ny tsipika famokarana fantsom-pitrandrahana lafaoro lehibe indrindra any Azia, ary mihoatra ny 70% ny tsenan'ny famokarana vy any Sina.
Diameter ivelany: Araka ny fangatahana, toy ny: 32mm, 38mm, sns
Ny hatevin'ny rindrina: 4-12mm sns.
Fitaovana: 10 #, 20 #, 30 #, 45 #, 20G, 40Cr, 20Gr, 16mn-45mn, 27SiMn, Cr5Mo, 12CrMo (T12), 12Cr1MoV, 12Cr1MoVG, 100CrMo910, 15CrMo, 35CrMo, 40CrMo, sns
Izahay dia mpanamboatra ary stockist mandritra izany, afaka miantoka ny fandefasana haingana.
Extention / Speed ​​Rod
Ny fantsom-pandihizana dia ampiasaina amin'ny lafaoro fipoahana. Ny fantsom-pitrandrahana milina fanokafana lafaoro dia vita amin'ny vy mahery. Misy ny famaritana sy fitaovana isan-karazany ho safidin'ny mpanjifa. Ny fitaovana lehibe indrindra dia vy 45 °, 40 Cr (40Cr), 42 Cr Mo (42CrMo). Ny vokatra dia misy tsorakazo fandoroana, fantsom-pitrandrahana lafaoro fantsona, fantsom-pitrandrahana alikaola, fantsom-pitrandrahana fantsom-bokatra, fantsom-pitrandrahana lafaoro fofona, fantsom-pitrandrahana lafaoro arofanina misy alikaola, fantsom-pitrandrahana karbônika karbôna ary fantsom-pitrandrahana misokatra. Amin'ny famokarana lafaoro fipoahana dia matetika ampiasaina hanokafana ny lavaka fitifirana tanimanga mba handemana fotaka.
Ny fantsom-pitrandrahana dia misy kofehy roa R38, kambana roa T38, kofehy T38 iray, kofehy iray R38 ary R32. Raha misy fantsom-pandrefesana sy kofehy ny fantsom-pitrandrahana, 32 ny savaivony ivelany amin'ny kofehy 32, ary ny savaivony ivelany misy ilay kofehy 38 dia 38. Ny fantsom-pandavahana sy ny fantsom-pandavahana dia mihombo, ary ny halavany dia mifanaraka amin'ny ny takian'ny mpanjifa.
Handray anjara mavitrika amin'ny hetahetan'ny mpanjifa izahay ary manasa anao tamim-pahatsorana hitsidika ny orinasanay. Manantena ny fahatongavanao!
Teo aloha: Fivarotana mafana kalitao fantsom-batana fandoroana vatokely fitaovana fandoroana lafaoro
Manaraka: Supanchor R25 R38 R51 vatofay vatofantsika SDA vatofantsika ho an'ny fananganana ambanin'ny tany
Borosy Robmm 45mm
Fanapoahana lafaoro fandoroana lafaoro